अभिनेता राजेश हमालले चार वर्षयता कुनै फिल्ममा अभिनय गरेका छैनन् । ‘बागमती’ र ‘शकुन्तला’ लगातार फ्लप भएपछि फिल्ममा अभिनय नगरेका उनी भन्छन्, ‘अब संख्या बढाउनका लागि मात्रै फिल्म गर्दिनँ ।’ पछिल्ला केही वर्षमा दर्जनभन्दा धेरै फिल्मको स्क्रिप्ट ‘रिजेक्ट’ गरेका हमाल म्युजिक भिडियोमा भने धमाधम नाचिरहेका छन् ।
बिहेपछि उनले पत्नी मधु भट्टराईसँग गायक सुनिलसिंह ठकुरीको ‘जिन्दगी’ बोलको गीतमा मोडलिङ गरे । एक वर्षअघि ‘मधुसँग राजेशको पहिलो म्युजिक भिडियो’ शीर्षकमा उक्त म्युजिक भिडियोको प्रचार भयो । त्यसपछि गायक भीम चापागार्इंले ‘चट्ट बसम देउरालीमा’ बोलको गीतमा उनलाई अभिनेत्री करिष्मा मानन्धर नचाए । यसरी ‘फिल्ममा चाहिँ छानेर मात्रै अभिनय गर्छु’ भन्ने हमाल म्युजिक भिडियोमा देखिइरहेका छन् ।
फिल्मको स्तरमा कम, संख्यामा ज्यादा ध्यान दिएको भन्दै अभिनेता दयाहाङ राईले ‘दोस्रो राजेश हमाल भएको’ आलोचना खेपिरहेका छन् । तैपनि फिल्म गर्न भ्याइनभ्याइ भएका राई म्युजिक भिडियोमा समेत अनुहार देखाइरहेका छन् । ‘परानै दिन्छु’, ‘हुरुक्कै भए म’ आदि उनले अभिनय गरेका म्युजिक भिडियो हुन् ।
नयाँ हुन् वा पुराना, व्यस्त हुन् वा फुर्सदिला, अहिले नेपाली फिल्मका अधिकांश कलाकार म्युजिक भिडियोमा छाउन थालेका छन् । एकथरी भनिरहेका छन्, ‘सजिलै पैसा कमाइन्छ, त्यसैले गरिन्छ ।’ अर्को थरी भन्छन्, ‘म्युजिक भिडियोमा काम गर्नु पनि कलाकारिता नै हो । गर्दा के फरक पर्छ र ?’
केकी अधिकारी, प्रियंका कार्की, बेनिशा हमाल, आँचल शर्मा, वर्षा राउत, वर्षा शिवाकोटी, पल शाह, पुष्प खड्का, धीरेन शाक्य, दिलिप रायमाझी, मरिष्का पोखरेल, एलिसा राई, सृष्टि श्रेष्ठ, माला लिम्बू, ज्योत्स्ना योगी, आकाश श्रेष्ठ, जेविका कार्कीलगायत दर्जनौं फिल्मका कलाकार अहिले म्युजिक भिडियोमा धमाधम काम गरिरहेका छन् । चलचित्रबाट दर्शकमाझ चिनिएका उनीहरूले म्युजिक भिडियोबाटै राम्रो कमाइरहेका छन् ।
चलचित्रका स्टारका लागि गतिलो स्रोत बनेको छ– म्युजिक भिडियो । ‘फिल्म छानेर मात्रै गर्छु’ भन्ने कलाकार पनि म्युजिक भिडियो छनोटमा भने गम्भीर देखिँदैनन् । ‘सुरु–सुरुमा त म को–एक्टर, डिरेक्टर को हो ? भन्ने पनि ख्याल नगरी जस्तो पायो त्यस्तै म्युजिक भिडियो गरिदिन्थें,’ अभिनेत्री बेनिशा हमाल भन्छिन्, ‘इजी मनी’ पनि भयो, काम पनि एकैदिनमा सकिने ।’ धेरैको सुझावपछि अहिले चाहिँ बुझेर, छानेर मात्रै म्युजिक भिडियोमा काम गर्न थालेको उनको भनाइ छ ।
एक समयका चल्तीका अभिनेता धीरेन शाक्यसँग अहिले फिल्मको अफर कम छ । फिल्ममा फाट्टफुट्ट भिलनेको अफर त आउँछ तर उनलाई चित्त बुझ्दैन । त्यसैले उनी पछिल्लो समय म्युजिक भिडियोमै रमाइरहेका छन् ।
‘फिल्ममा काम पाउन छाडेपछि म्युजिक भिडियो रोज्नुपरेको हो ?’
जवाफमा उनी भन्छन्, ‘होइन । यता राम्रो आम्दानी हुन्छ, त्यसैले गर्न थालेको हुँ । अनि, चलचित्रमा काम गर्नेले म्युजिक भिडियो खेल्नु हुँदैन भनेर कतै लेखेको पनि त छैन ।’
केही महिनाअघि अभिनेता राजेश हमालकहाँ फिल्म ‘प्रेमगीत–३’ को निर्माण युनिट मुख्य भूमिकाको अफरसहित भेट्न पुगेको थियो । फिल्ममा यसअघि हमालले कुनै पनि चलचित्रबाट नलिएको रकमसहितको पारिश्रमिक अफर गर्दासमेत निर्माण युनिट दिन तयार भयो । तर, उनले फिल्म खेल्न मानेन् । तर, त्यसको केही सातामै उनी म्युजिक भिडियोमा देखिए । उनले स्पष्ट कारण त खुलाएनन् । तर भने, ‘फुर्सदको समयमा भिडियो खेलिरहेको हुँ । धेरै दिन पनि नलाग्ने, आम्दानी पनि राम्रै भएपछि किन छाड्नु र ?’ हमालको तर्क छ, ‘कुनै पनि कामलाई सानो ठूलो भन्नु राम्रो होइन । सबैका आ–आफ्नै महत्व छ ।’
केही वर्षअघिसम्म म्युजिक भिडियो निर्माण गर्न ४०–५० हजार भए पुग्थ्यो । तर, अहिले एउटा गीतको भिडियो निर्माणकै लागि ५ देखि १० लाखसम्म खर्च हुने गरेको छ । ‘भिडियोमा चाहेजति लगानी बढेपछि नै हो यसमा कलाकारको प्रवेश ह्वात्तै बढेको,’ म्युजिक भिडियोका व्यस्त निर्देशक शान थापा भन्छन्, ‘यसले कलाकारलाई पनि सजिलै पैसा कमाउने हिसाबले फाइदा भएको छ । र, कलाकारका कारण गीतको प्रचारमा पनि फाइदै भएको छ ।’
‘म्युजिक भिडियो भनेको एक दिनको काम हो,’ अभिनेता पुष्प खड्का भन्छन्, ‘साँझ घर फर्किने बेला खल्तीमा १ लाख आउने भएपछि किन काम नगर्नु ? रेकर्डिङमा पनि जानु नपर्ने, फिल्मको जस्तो प्रमोसनमा पनि हिँडिराख्नु नपर्ने, पैसाका लागि किचकिच पनि गर्नु नपर्ने । यस्तो सजिलो काम पाएपछि कसले गर्दैन ?’ उनले कुरा नलुकाई अर्को कुराको खुलासा गरे, ‘चलचित्रलाई दिएको समय म्युजिक भिडियोलाई दिने हो भने त्यसको दोब्बर आम्दानी गर्न सक्छु । तर, चलचित्रको आफ्नै महत्व छ । जता–जता मिल्छ गरिरहेको छु ।’
म्युजिक भिडियोका महँगो मोडलका रूपमा चिनिने पुष्प महिनाको १० देखि १५ वटासम्म म्युजिक भिडियोको अफर आउने बताउँछन् । उनले एउटा भिडियोको १ लाखदेखि १ लाख २० हजार रुपैयाँसम्म पारिश्रमिक लिने गरेको बताए । ‘म कलाकार हुँ, चलचित्रमा सधैं काम पाइन्छ भन्ने हुँदैन,’ उनी भन्छन्, ‘चलचित्रमा काम नपाएका बेला भिडियोमा काम गर्ने हो । पारिश्रमिक राम्रो हुने भएपछि छाड्ने कुरै हुँदैन ।’
चल्तीका अर्का म्युजिक भिडियो मोडल हुन्, पल शाह । उनका भिडियोमा प्राय: जोडी भएर देखिने अनुहार हो– आँचल शर्मा । दुवै म्युजिक भिडियोका महँगा कलाकार हुन् । पल प्रतिभिडियो १ लाख रुपैयाँ बढी पारिश्रमिक बुझ्छन भने आँचल १ लाख हाराहारी ।
यस्तै एक सय बढी म्युजिक भिडियो खेलिसकेकी अभिनेत्री वर्षा शिवाकोटी फुर्सदको समयमा भिडियोको काम गर्ने गरेको बताउँछिन् । ‘फिल्म नभएका बेला म्युजिक भिडियो गर्छु,’ उनले भनिन् । त्यस्तै अभिनेता दयाहाङ राईले भने मन परेका गीतमा मात्रै अभिनय गर्ने गरेको बताए ।
फिल्ममा फ्लप, भिडियोमा हिट
चार वर्षअघि ‘के म तिम्रो होइन र’ फिल्ममार्फत अभिनयमा डेब्यु गरेकी अभिनेत्री मरिष्का पोखरेलले त्यसपछि ‘चपली हाइट–२’, ‘लम्फु’, ‘पण्डित बाजेको लौरी’, ‘मिस्टर भर्जिन’ लगायत थुप्रै फिल्म खेलिन् । तर, एउटै फिल्मले पनि व्यावसायिक सफलता हासिल गर्न नसकेपछि उनी निराश थिइन् ।
त्यही बेला उनलाई गायिका विष्णु माझी र गायक कुलेन्द्र विश्वकर्माले गाएको गीत ‘सालको पात टपरी’मा नाच्न अफर आयो । कुलेन्द्रका अनुसार अभिनेत्री प्रियंका कार्कीले उक्त म्युजिक भिडियोमा अभिनय गर्ने अफरलाई ‘हेपेरै’ रिजेक्ट गरेकी थिइन् । तर, चलचित्रमा निरन्तर फ्लप भइरहेका बेला मरिष्काले उक्त अफरलाई सहजै स्वीकारिन् । र, यही गीत मरिष्काको करिअरका लागि ‘टर्निङ प्वाइन्ट’ भयो । फिल्ममा लगातार असफल उनलाई भिडियोको लगातार अफर आइरहेको छ ।
केकी अधिकारी, रीमा विश्वकर्मा, वर्षा शिवाकोटी, आँचल शर्मालगायत कलाकार पनि यस्तै सूचीमा पर्छन्, जो फिल्ममा असफल भइरहेका छन् । तर, भिडियोको निरन्तर अफरले सहज जीवन बाँचिरहेका छन् ।
कलाकार लिँदा खर्च बढी
पछिल्लो समय लगातार म्युजिक भिडियो निर्देशन गरिरहेका सुब्रत आचार्यले फिल्मका कलाकारका कारण पनि म्युजिक भिडियो निर्माण खर्च पनि बढिरहेको बताउँछन् । ‘फिल्मका कलाकारले कम पारिश्रमिकमा भिडियो खेल्दैनन्, त्यसले भिडियोको लगानी पनि बढाएको छ’ उनले भने ।
एक वर्षअघि फिल्मका हिरोइनलाई बढी पारिश्रमिक दिएर भिडियो खेलाएका कारण लोकदोहोरी वृत्तमा ठूलै तरंग आएको थियो । लोकदोहोरी क्षेत्रका व्यस्त मोडलले विभेद भएको भन्दै आलोचना गरेका थिए ।
मोडल करिष्मा ढकालले म्युजिक भिडियो निर्माताप्रति आक्रोश पोख्दै फेसबुकमा लामो स्टाटस लेखेकी थिइन्, ‘फिल्मका हिरोइनलाई एक लाख दिन तयार हुने, हामीलाई २० हजार दिन पनि नाक खुम्च्याउने ?’
अर्की व्यस्त मोडल रश्मि तामाङले करिश्मासँग प्रतिक्रिया जनाउँदै गुनासो गरेकी थिइन्, ‘लोकगीतमा खेल्नेलाई २० हजार तिर्न निकै गाह्रो परेको देखिन्छ तर लाख रुपैयाँ तिरेर फिल्मका नायक–नायिकालाई भिडियो खेलाउनु हुन्छ । तर, लोकगीतमा लोकगीतका कलाकारलाई २०–३० हजार दिन पनि हिच्किचाउने हाम्रा लोक सर्जकहरू नै हुन् । त्यसैले लोकदोहोरी कलाकारलाई फिल्मकर्मीले हेपे भन्नुको तुक छैन । किनभने हामीलाई हेप्नुको पछाडि हामी आफैं भागिदार छौं ।’
चल्तीका अनुहार किन ?
गायक तथा संगीतकार नरेश जोगीले हालै महंगो पारिश्रमिक तिरेर आफ्नै शब्द, स्वर तथा संगीत रहेको थारु गीत ‘पहाडी बठिनिया’ मा पल शाह र वर्षा राउतलाई जोडी बनाएर नचाए । भिडियोका लागि करिब साढे चार लाख खर्च भयो । तर, यसमा करिब आधा खर्च त कलाकारको पारिश्रमिकमै भयो । पलले १ लाख २० हजार पारिश्रमिक लिए भने वर्षाले ८० हजार रुपैयाँ ।
यो त उदाहरण मात्रै हो, उनका प्राय गीतको म्युजिक भिडियोमा फिल्मका कलाकार नै हुन्छन् । ‘किन चाहियो फिल्मकै कलाकार ?’ जवाफमा उनी भन्छन्, ‘पहिलो कारण त लगानीकर्ता नै हुन् । अहिले धेरैजसो युट्युब च्यानलले लगानी गरिरहेका छन् । उनीहरू चल्तीका कलाकारलाई खेलाउन सके जति पनि लगानी गर्न तयार हुन्छन् । उनीहरूलाई लाग्छ, चल्तीका कलाकारले अभिनय गरे भिडियोको भ्युज बढी जान्छ ।’
उनी फिल्मका कलाकारलाई अभिनय गराउँदा गीत प्रमोसनमा फाइदा हुने पनि बताउँछन् । ‘फिल्मका कलाकारलाई खेलायो भने संघर्षरत गायकलाई हेर्ने दृष्टिकोण पनि फरक हुँदोरहेछ, सम्मान पाइँदो रहेछ’, उनले फिल्म स्टारलाई भिडियोमा लिनुको फाइदा सगर्व सुनाए ।
फिल्मका कलाकारलाई म्युजिक भिडियोमा नचाइरहने निर्देशक तथा कोरियोग्राफरमा पर्छन्, शंकर विसी । कतिपय अवस्थामा आफूले नचाहँदा–नचाहँदै पनि निर्माताको दबाब र चाहनाका कारण भिडियोमा हिरोइन लिनुपरेको उनले बताए । ‘तर, हिरोइनलाई नचाएकै भरमा गीत चल्छ भन्ने होइन’, उनी भन्छन्, ‘चल्नलाई गीत र भिडियो नै राम्रो हुनुपर्छ ।’
गीतलाई फाइदा, फिल्मलाई घाटा
कुनै समय अभिनेत्री स्वस्तिमा खड्काको राम्रो आम्दानीको स्रोत थियो– म्युजिक भिडियो । एक दिन काम गरेर एक लाख रुपैयाँसम्म पारिश्रमिक लिन्थिन् । यसरी उनले थुप्रै म्युजिक भिडियो गरिन् ।
तर, डेढ वर्षदेखि उनले खासै म्युजिक भिडियो गरेकी छैनन् । यसको कारण हो– फिल्मलाई असर पुग्नु । ‘अडियन्स धेरै झुक्किने रहेछन्,’ उनले भनिन्, ‘अहिले म्युजिक भिडियोको क्वालिटी पनि फिल्मी गीतको जस्तै भइसक्यो । गीतको पब्लिसिटी पोस्टर पनि फिल्मको जस्तै भइसक्यो । त्यसैले मैले अभिनय गरेको म्युजिक भिडियो रिलिज हुँदा पनि दर्शकहरू फिल्मको गीत ठानेर झुक्किने रहेछन् ।’
म्युजिक भिडियो धेरै गर्दा आफ्नै फिल्मको गीतको समेत चार्म नभएको बताइन् । ‘फिल्मलाई एकदमै असर पुगेको महसुस भएपछि भिडियो गर्न छाडेको हुँ’, उनले भनिन् ।
अहिले पनि सुरुमै एक लाख पारिश्रमिक दिने अफरसहित उनलाई म्युजिक भिडियोको अफर आउँछ । तर, उनी सिधैं नकार्छिन् ।
‘डेढ वर्षमा जति अफर लत्याए, ती सब स्वीकार गरेको भए अहिलेसम्म ३० लाख जति भिडियोबाटै कमाइसक्थें,’ उनी दाबी गर्छिन् । केही समयअघि पति निश्चल बस्नेतसँग जोडी बाँधेर अभिनय गरेको ‘नाच फिरिरी’ बोलको गीतले उनको करिअरमा थप उचाइ बढाउन मद्दत गर्‍यो । ‘यस्तै खाले भिडियो आए त गर्ने थिएँ तर चित्त बुझ्ने कामै आउँदैन,’ उनले भनिन् ।